USB Stick ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများ Total Detail ~ ITmanHOME
23:33 memory stick, နည်းပညာ No comments
USB Stick ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများ Total Detail
အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားနိုင်သော Application များ ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ Portable Application များဆန်ဆန် Portable OS ( အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားနိုင်သော စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ) ကို Drive ထဲတွင် ထည့်ထားပြီး ကိုယ်သွားတဲ့နေရာ ဥပမာ Cyber Cafe လိုမျိုးတွင် ကိုယ့် OS နှင့် ကိုယ်သုံးစွဲသည့် အခါ လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အ၀ ရရှိစေနိုင်သည်။
အချို့ Cyber Cafe တွေနဲ့ ရုံးတွေမှာ Hardware လိုအပ်ချက် မြင့်မားတဲ့ Software ( ဥပမာ- Photoshop ) တွေကို တင်မထားတတ်ဘူး။ အဲလိုနေရာတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Drive ထဲမှာရှိတဲ့ Portable Application က ကိုယ်လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က ကိုယ့် USB Memory Stickကို အမြဲတမ်းလိုလို မလုံလောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ သိုလှောင်မူ ပမာဏကို တိုးစေဖို့ အလွန် လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။
Credit to လင်းငယ်@ mandalay gazette
ဒီFile တွေကို Run လိုက်ရင်တော့.... Virus ၀င်သွားပြီပေါ့ ဒီတော့ ဒီ File တွေကို မ Run အောင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
USB - stick ထိုးမရခြင်းနှင့်ဖြစ်တက်တာလေးများ
stick ထဲမှာပြည့်နေရင်လည်းလက်မခံဘူး…မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်ပြီးမှထည့်သင့်တယ်….
Stick ကကောင်းပါရက်နဲ့ usb port ကအလုပ်မလုပ်တာ usb port ကအလုပ်လုပ်ပါရက်နဲ့ stickကမကောင်း တော့ ရင်တခြားသောကွန်ပျူတာတွေမှစမ်းသပ်ကြည့်ပါ…